Usuku My Pet » 3 Amathiphu To Dating Ngesikhathi Exam Isikhathi
3 Amathiphu To Dating Ngesikhathi Exam Isikhathi
Igcine ukubuyekezwa: uJan. 12 2021 | 2 imiz ufunde
It futhi kusuke sikhathi sonyaka. Exam period uye snuck up kuwe futhi usebe yayiyisiqalekiso khona yakho. Ziningi wonke-nighters, izinsuku ukucindezeleka amahora kuminyana yikho ukuphila kwakho njengoba umfundi siqukethe. Ngiye kakade wazungeza campus futhi Kwakuba sengathi in a apocalypse zombie- yilokho a nokungalali kanye ukweqisa izidakamizwa ikhofi kanye candy kwenza umfundi isilinganiso.
Omunye umphumela ukuhlolwa isikhathi sonke athole wagcizelela ngesikhathi esithile futhi usikhiphele kubantu esisondelene nabo. Lokhu akuyona ezinhle for dating ukuphila kwakho. Cishe banomuzwa like aninakuphila social nokuthi umdlalo wakho uya phansi abakhwabanisi. Uma ungazange wayazi okwamanje, uku mayelana to.
Ngenhlanhla, awudingi ukuba ukhathazeke. Lezi 3 amathiphu angakusiza Ace uhlolo ngenkathi ngokulondoloza uphawu eliphezulu in dating ukuphila kwakho.
Cabanga ogodla ku charm yakho.
Exam period isikhathi ebalulekile emfundweni yakho career, kanjalo kungase kube umqondo smart ukuze kuphole it on the dates. Njengoba ufuna ukwenza kahle ezivivinyweni zakho, ungafuni ukuba engozini it by uphuthelwa isikhathi esiyigugu cwaningo ngenxa umbhangqwana izinsuku. Nakuba ubhekene ukufunda ku-ukujula ezakhiwe zesayensi kanye zimo ibhizinisi, ukufunda indlela ukuvula okwesikhashana phansi charm yakho kuyoba inzuzo kuwe nomlingani wakho.
Balance nje kubalulekile njengoba i-caffeine.
Red Bull, ukhilimu oyiqhwa, chips and ikhofi kubonakala ukuthuthukisa izinga eliphezulu ingqondo ngesikhathi ukuhlolwa isikhathi. Nokho, ngeke abe usizo lapho kuziwa endabeni yokuqomisana, kanjalo balance umngane wakho omusha best. It ngeke sikusize ngalutho uma utadisha usuku lonke, ubusuku b9, never ukubona ukukhanya kwelanga futhi ningabe nisathatha breaks. Ukulondoloza a balance phakathi nangokugcina amakhefu kubalulekile futhi ubelokhu kungase kutholakale ukuba ngcono amakhono akho ukutadisha futhi ukuhlolwa ukusebenza.
Ukulinganisa in time sokuphumula, ukucindezeleka, futhi ezikudingayo ezinye kwelanga kuyisihluthulelo. Lezi amakhefu cwaningo babe namathuba enhle ukuchitha isikhathi nabantu obathandayo. Cabanga kokuba ubusuku movie njalo kangaka ngokuvamile noma ukubukela show TV ndawonye.
Okukanye, seziphumele ngaphandle nokuba esebenzayo kuyinto umsebenzi omuhle ekuzihlanganiseni, kanye inzuzo empilweni yakho iyonke- ebona njengoba ekudleni kwakho liqukethe ushukela caffeine. Hamba sishaywe umoya short phakathi sessions bekrema kanye rant mayelana yezingcindezi zokuphila imfundo ephakeme. Air Fresh izogcina ubuchopho bakho fresh.
Kungakhathaliseki ukuphila yayo short izingxoxo phezu Skype, chatting on the phone nje ukuzwa izwi labo, late night Cuddle sessions noma ukulala-overs, uqiniseke ukulinganisela phakathi komsebenzi kanye play.
Pretty kucacile This komuntu. Ungakhohlwa ukugubha once ezivivinyweni zakho yanqoba! Hlela into fun ukuthi nobabili ongayenza ukugubha ukunqoba uzamazamisa zonke izivivinyo zakho futhi ngivuselele uxhumano lwakho. Uma ungumuntu i beaver bemagange futhi sihlele into kusengaphambili khona-ke wayeyobanika okuthile ukubheka phambili kuwe.
Lezi 3 amathiphu kuyokusiza ugcine umlilo in love ukuphila kwakho ngesikhathi matasa period ukuhlolwa. Ngokufunda la izinsalela zokudla ulwazi kanye izifundo zakho ezingenakubalwa, uzokwazi ukunqoba uhlolo kanye dating ukuphila kwakho.